Alfred Tennyson naPaul Verlaine. Mitsara uye nhetembo dzekurangarira. | Zvazvino Zvinyorwa
Chirungu Alfred Tennyson uye French Paul Verlaine.
Hafu ye Nyamavhuvhu. Hafu yenyika vacations uye imwe hafu simbe zvakare mumaitiro ake ezuva nezuva. Kupisa, usimbe, kudzikama, zvisikwa, gungwa, zuva, makomo, manheru akareba, kubuda kwezuva ... Nzvimbo inokodzera zvishoma nhetembo. Kune vakanaka, vevakanaka. Ingo kungonzwa iyo bug uye tsvaga zvimwe. Zvakanaka wadii kutendeukira ku vaviri vadetembi vakuru vezana ramakore rechiXNUMX. Chirungu neFrance. Ishe Alfred Tennyson naPaul Verlaine. Ngativerengei zvishoma uye tirangarire zvimwe zvake mitsara nezvidimbu zvenhetembo dzake.
1.1 Mutero weChiedza Brigade
1.2 Mukadzi weShalott
2.2 Ndarota nezvako manheru ano
Mudetembi wechiChirungu anozvarwa muSomersby muna 1809 inoonekwa seimwe yeakanyanya kunyorwa mumabhuku uye pasina mubvunzo yaive iyo inonyanya kukosha yenguva yekukunda.
Baba vake, avo vaive wedzinza raMambo Edward III weEngland, vakamurera nenzira yakaoma uye yechinyakare. Ini ndinodzidza mu Trinity College, kubva kuCambridge, kwaakabatana neboka rekunyora rinozivikanwa se Vaapostora. Uku ndiko kwaive kutanga kwebasa rake rekunyora. Akanyora nhetembo dzake dzekutanga muna 1830, asi akazove wake anonyanya kurumbidzwa mabasa Chemhondoro Mukadzi weShalott, Rufu rwaArthur y Ulysses. Uye pamusoro pezvose pane elegy yake In Memoriam (1850), yakatsaurirwa kushamwari yake yepamwoyo, Arthur Hallam, uye mukurumbira wake Mutero weChiedza Brigade (1855). Akafa muna 1892.
Kunyangwe zvizhinji zvichitorwa, zvakawanda zvasara; uye kunyangwe isu tisiri izvozvi simba iro kuti mumazuva ekare aifambisa pasi nedenga, zvatiri, isu tiri. Hutsinye hwemagamba emoyo, husina kusimba nenguva nemagumo, asi wakasimba mukuda, kurwira, kutsvaga, kuwana uye kusarega.
Zvirinani kuve wakada uye kurasikirwa pane usati wamboda.
Kurota ndokwechokwadi pavanopedza, asi chii chiri kurarama asi kurota?
Hazvife zvakanyanyisa kunonoka kutsvaga nyika iri nani uye nyowani, kana mukuedza isu tichiisa ushingi netariro
Nhema idzo dzinenge dzechokwadi dzakaipa kupfuura nhema dzese.
Mufaro haufanani nekuziva zvatinoda, asi mukufunga zvatinoita.
Mutero weChiedza Brigade
"Pamberi, Chiedza Brigade!"
"Charge pfuti!" Akadaro.
avo mazana matanhatu vakatasva.
Mumwe murume akafenda?
Kwete, kunyangwe dai mauto aiziva
izvo zvakanga zvisina maturo.
Vakanga vasipo kuti vapindure.
Vakanga vasipo kuti vafunge.
Vaingovepo kuti vakunde kana kufa.
Pamahombekombe erwizi, akarara,
minda mikuru yebhari uye rye
vanopfeka zvikomo uye vanowana denga;
Kuburikidza nemunda, iyo nzira inofamba
akananga kushongwe churu cheCamelot;
Uye kumusoro uye pasi, vanhu vanouya
kutarisa uko maruva anotumbuka,
pachitsuwa icho chinoratidzika sezasi:
Icho chitsuwa cheShalott.
Mupoplar unodedera, musowowhu wasvava,
Mhepo dzakachena dzinozunza mhepo
uye wave, iyo inogara ichizadza mugero,
parwizi uye kubva kuchitsuwa chiri kure
kuyerera kuyerera, kusvika kuCamelot.
Makumi mana emadziro: grey shongwe
vanotonga nzvimbo pakati pemaruva,
uye mukuvanda kwechitsuwa anovanda
Iye akazvarwa muMetz mu 1844 uye akadzidza kuLycée Bonaparte muParis. Akafuridzirwa na Baudelaire, akazozivikanwa nemabhuku ake ekutanga enhetembo, Nhetembo dzeSaturnian, kubva muna 1866, Mapati akatsamwa, kubva muna 1869 uye Rwiyo rwakanaka, 1870. Asi hupenyu hwakadzikira, matambudziko ake ne doro uye chaizvo hukama hunopenga ndichidawo naye nyanduri Arthur Rimbaud vakamutora kuenda naye jeri. Paakaburitswa, akaburitsa Wisdom, muunganidzwa wenhetembo dzechitendero. Muna 1894 akasarudzwa muParis se Muchinda wanyanduri. Akafira ipapo muna 1896.
Mimhanzi kutanga, gara uri mimhanzi!
Uye kwakadzika kutenda kwangu uye iwe wakanyanyisa kwandiri, zvekuti mune zvese zvandinotenda ndinoraramira iwe chete.
Misodzi inodonhera pamoyo kunge mvura iri mumusha.
Chema pasina chikonzero mumoyo uno chakaodzwa moyo Chii! Hapana kutengesa? Iyi duel haina chikonzero.
Vhura mweya wako uye nzeve yako kune ruzha rwe mandolin yangu: nekuti ndakuitira iwe, rwiyo urwu runotyisa uye runobata.
Kuchema kwakadzika kwazvo kwevholiyumu yematsutso kwakafanana neronda mumweya wekushungurudzika kusingagumi.
Mudiwa wangu, ive inotapira, inotapira ...
dzikama zvishoma, o moto, fivha yako ine shungu;
mudikani, dzimwe nguva, anofanira kunge aine nguva yakachena
uye mudanane nemwoyo munyoro sehama.
Ivai vakaneta, mupfuurire neruoko rwenyu rworudo;
Ndinosarudza kupenga kweawa rine mhirizhonga
kugomera uye kushaya njere kupenya
uye muromo unoziva kunditsvoda kunyangwe zvikandinyepera. (…)
Ndarota nezvako manheru ano
Wakapera simba nenzira churu
Uye iwe wakagunun'una zvinhu zvakawanda ...
Uye ini, sekungoravira kwaunoita muchero
Ndakakutsvoda nemuromo wangu wese
Zvishoma pese pese, gomo, mupata, bani.
Icho chaive chekusimba,
Kubva pane inoyevedza chaiyo chitubu:
Mwari ... mweya upi uye chiuno chakadii! (…)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Alfred Tennyson naPaul Verlaine. Mitsara uye nhetembo dzekurangarira.
Kutangazve. 5 zvikonzero nei tichizviita. Kana kwete.
Ava ndivo vanyori vanobhadharwa zvakanyanya pasirese